High School တွင်ဆရာများသည်ထိပ်တန်း 10 လက်ဆောင်များ
High School တွင်ဆရာများများအတွက်ထိပ်တန်း 10 လက်ဆောင်များ
အဆိုပါဂရုတစိုက်-penciled ကဗျာ, အလက်ထွင်းထုဆရာ paraphernalia, The-အတော်လေး-စားသုံးဆီမဟုတ် brownies - ဟုတ်ကဲ့, သင်တန်းဆရာများများအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်များနှလုံးထဲကလာသောသူများဖြစ်ကြ၏။ ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ဆရာများလက်ဆောင်တွေသူတို့မြိုးမြိုးခစျြတအဖြစ်, (ကျွန်တော်ဒီရက်အဘယ်အရာကိုချောကလက်-အနံ့ laxatives ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ရရှိနိုင်မှုနှင့်တကွ, brownies အစာစားနေတဲ့မဟုတ်။ ) ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအတွေးတန်ဖိုးထားပြုပါ!
ပရိယာယ်အားဖြင့်သင့်ရဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး, သင်ကဗျာဘို့စိတ်ကူးများထဲကလတ်ဆတ်တဲ့ဆိုရင်အချို့ကိုသင်စျေးဝယ်ထွက်သည်ခေါင်းသောအခါ, ထိုဆရာ, ဆရာမများအတွက်ကဤလက်ဆောင်တွေထဲကတစ်ခုစဉ်းစားပါ။ သင့်ရဲ့ဆရာကဤအမှုအရာခစျြလိမျ့မညျအကြှနျုပျကိုယုံကြည်စိတ်ချ!
Starbucks က Gift Card လက်ဆောင်
Getty Images | HeroImages
ကျနော်တို့နံနက်ယံ၌ 7:25 မှာကျောင်းသားတစ်ဦး pack ကိုစိုက်ကြည့်နေတာအထူးသဖြင့်လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ပူအဖျော်ယမကာများကဲ့သို့ကျနော်တို့ဆရာ။ ကော်ဖီကျိန်းသေပြန်ပေးသည်သောဆုကြေးဇူးကိုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နေဆဲအိပ်ပျော်နေလျှင်ကျနော်တို့သင်ပေးလို့မရပါဘူး။ နောက်ထပ် "
Getty Images | Poba
ကမ္ဘာကြီးကို၏ကျန်သလောက်, သူတို့ကျောင်းသားများအတွက်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်၎င်းတို့၏ထိန်းသိမ်းထားဖို့နောက်ဆုံးပေါ်လူတန်းစားများကဲ့သို့အမှုအရာအပေါ်သူတို့ရဲ့ငွေဖြုန်းနေသည့်အခါမကြာခဏကောင်းတစ်ဦးရုပ်ရှင်နဲ့တူဆရာများ သင်ကြားမှုလက်မှတ် ့ရုပ်ရှင်လက်မှတ်တွေနဲ့တူသောအရာတို့ကို၎င်းအားဖြင့်သွားနိုင်ပါတယ် လမျးနား။ ဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်လက်မှတ်များနှင့်အတူမိတ်ဆွေတစ်ဦး / အိမ်ထောင်ဖက်သူတို့နှင့်အတူအထဲကတညဉ့်ပေးပါ။ နောက်ထပ် "
Getty Images | ပတေရုသ Dazeley
ဆရာ, ဆရာမများအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်များတစ်ခုမှာသင်ကခြုံရန်မလိုပါတစ် box ထဲမှာပါရှိပါတယ်။ သင်၏ဆရာ '' အကြိုက်ဆုံးပရဟိတလုပ်ငန်းထွက်ရှာပါ, မိမိတို့အမည်များကိုတစ်ဦးလှူဒါန်းမှုပါစေ။ ထို့နောက်သူတို့ကိုသင်ပြုသောင့်ခြင်းနှင့်သင်ကသူတို့ကိုပျော်ရွှင်အားလပ်ရက်ပေးရန်သေချာစေပါလိမ့်မယ်အတိအကျအဘယ်အရာကိုသူတို့ကိုပြောပြတစ်ကဒ်ပါစေ။ နောက်ထပ် "
Getty Images | ခရစ်ယာန် Zachariasen
ဆရာများစာဖတ်သူများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာများအတွက်လက်ရှိဆက်နေရန်ဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ သင်၏ဆရာအထင်ကြီးလိုပါသလား? သူတို့ရဲ့လိပ်စာများအဘို့ထိုသူတို့မေးပါနှင့်သူတို့ဆုံးမဩဝါဒပေးနေတဲ့လယ်ပြင်၌တစ်မဂ္ဂဇင်းအဘို့ထိုသူတို့ sign up ကို။ သူတို့ကလွယ်ကူသောသုတေသနအသုံးပြုနိုင်စွမ်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ် "
Getty Images | Credit: Dougal ရေ
ထိုအခါငါလက်ဝှေ့သမားဘောင်းဘီတိုတစ်အထုပ်မဆိုလိုဘူး။ ယခုနှစ်အတွင်းမှာသင့်ရဲ့ဆရာအာရုံစိုက်။ သင့်ရဲ့ဇီဝဆရာမအစာရှောင်ခြင်းကားများအတွက်တစ်ဦးခွံမာသီးလား? သူ့ကို Matchbox Porsche Buy ။ သင့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ဆရာမအဲလစ်ဇဘက်ဆရာတော်နဲ့မေတ္တာ၌တည်ရှိ၏ (နှင့်အဘယ်သူသည်မဟုတ်လော), သူမ၏ကဗျာအနည်းငယ်ကိုစာအုပ်ဝယ်ဖို့။ သင့်ရဲ့ကနျြးမာရေးဆရာ garbanzo ပဲမျိုးစုံသို့လား? hummus နှင့်အချို့သော pita ချစ်ပ်များ၏တစ်ဦးကစည်ပိုင်းကြင်အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်။ ရုံသင်သည်သင်၏ဆရာ likes တစ်ခုခုမှအာရုံစူးစိုက်မှုကို paid သိ. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, အစစ်အမှန်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Getty Images | သူရဲကောင်းပုံများ
ဆရာ, ဆရာမဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ၏နောက်ဆုံးပေါ် stack ဂမ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အခါမှာအပန်းဖြေဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်တဲ့အခါသူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်အဟောင်း, iPod အပေါ်အချို့သော Rolling Stones သို့မဟုတ်ဘော့ဘ်မာလီမှ jamming ပါတယ်။ ရှည်လျားသောလမ်းရာသီတောက်ပအောင်ဆီသို့သွားရနိုင်သည်ကိုဆရာ, ဆရာမများအတွက်လက်ဆောင်များတစ်ခုမှာတစ်ဦးကို iTunes လက်ဆောင်ကဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ Music ကိုလက်ျာဘက်, ဆရာ, ဆရာမပျော်ရွှင်အောင်သက်သေပြ, သူတို့သည်ဂမ်နေတဲ့အခါသင်ကျိန်းသေသင်၏ဆရာပျော်ရွှင်ချင်ပါသလဲ? ညာဘက်။ နောက်ထပ် "
လေယာဉ်မှူးဒေါက်တာဆုပ်ကိုင် Gel ကလောင်
ဆရာများအားလုံးအချိန်ကိုရေးသားနေကြသည်။ သူတို့ကိုရှေ့ပြေးဒေါက်တာဆုပ်ကိုင် Gel ကလောင်နဲ့တူကောင်းတစ်ဦးကလောင်အမည်ကိုရယူပါ။ ဒါကမကောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်ကို၎င်း, အမေရိကန် arthritis Association ကရှည်လျားအရေးအသားစစ်မှုထမ်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဘောပင်ကြေညာခဲ့သည်။ ကြောင်း volumes ကိုဆူညံအော်ဟစ်မပါဘူးဆိုရင်, အဘယ်သို့ငါအလိုတော်မသိရပါဘူး။
Lisa ကို Hallett တေလာ
သေချာတာပေါ့, တိုင်းဆရာမတစ်ဦးကခရစ္စမတ်သစ်ပင်ရှိပါတယ်မဟုတ်ပေမယ့်လုပ်ပေးသောသူတို့အဘို့, တစ်ဦးခရစ္စမတ်အဆင်တန်ဆာတို့သည်ကြီးစွာသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ငါနှစ်အတွင်းပဒေသာလက်ခံရရှိပါတယ်, အဲဒါကကျွန်မအသီးအသီးရာသီသည်ငါ့ခရစ်စမတ်သစ်ပင်တက် setting တယ်သကဲ့သို့ငါ့ကိုကအားပေး၏သူလေးတွေ၏အမှတ်တရများမှတဆင့်ပြန်သွားကြဖို့ခဏယူပျော်စရာပါပဲ။ ငါ့မကျြစိမှအနည်းငယ်မျက်ရည်တတ်၏။ အပိုဆု? ခရစ္စမတ်အဆင်တန်ဆာသင်ပိုမိုထက်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုဆရာ, ဆရာမ gifting နေပါလျှင်ပြီးပြည့်စုံသောစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ နောက်ထပ် "
Getty Images | ဟိုဆေး Mariola
ဆရာများတနေ့လုံးပြောဆိုပါ။ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?6ကြိမ်မြောက်ကာလအားဖြင့်ကျနော်တို့အနေနဲ့ Altoid အဘို့အသေခံနေတာ, ငါတို့ကျောင်းသားတွေဟာကျနော်တို့လည်းတဦးတည်းရှိခဲ့လိုနေကြသည်။ Mint ၏နည်းနည်းသေတ္တာနှင့်အတူသင်၏ဆရာတက်ချိတ်, သူတို့သည်ရစေရန်အငြိုးထားသောဆိုရင်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့အများစုကျေးဇူးတင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဘယ်အရာကိုမျှထို Altoids ထက်၎င်း၏ Goodies တစ်ဦးဆရာရဲ့ stash ကနေပိုမြန်ပျောက်သွားမှာ, သင်လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်အကြိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ ရှိတ်စပီးယားစဉ်အတွင်း Halitosis? တော်တော်လေးမဟုတ်ပါဘူး။
Getty Images | Credit: Caiaimage / ခရစ်ရိုင်ယန်
သင်အမှန်တကယ်ညာဘက်သင့်ရဲ့ဆရာပိတ်ခြေအိတ်ခေါက်ချင်လျှင်, သင့်တပြင်လုံးကိုလူတန်းစားပါဝင်ပတ်သက်ရ။ အတန်းထဲတွင်လူတိုင်းသင်တစ်ဦးဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုပေးပို့ရှိသည်, ဒီပုံတွေကို Shutterfly သို့မဟုတ် Snapfish အပေါ်တစ်ဦးမှတ်ဉာဏ်စာအုပ်သို့မဟုတ်အခြားမှတ်ဉာဏ်-စာအုပ် site ကိုလုပ်ရမည်။ အဘယ်အရာကိုမျှပိုပြီးသင့်ရဲ့တောက်ပခြင်းနှင့်ထွန်းလင်းမျက်နှာများ၏မှတ်ဉာဏ်ထက်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုအဘို့သင့်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်။
အကွိမျမြားစှာရှေးခယျြမှုများအတွက်ထိပ်တန်း 15 စမ်းသပ်ခြင်းသိကောင်းစရာများ
ဘာ Curve တွင်ဂမ်ပါသလား
ဒီသင်ထောက်ကူစာရွက်နှင့်အတူသင့် Inferencing ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်
Gibbous မွန်း: မှားသောစိတ်နှင့်ကင်းလွတ်နှင့်နီးပါးအပြည့်အဝ
သမိုင်း: photovoltaic Timeline ကို
ကိုတက်မီးခိုးရောင် Peak: လူကြိုက်များသောကော်လိုရာဒိုတိုင်အောင်တဆယ်လေး
တစ္ဆေတှေ့ဆုံ - စစ်မှန်သောဇာတ်လမ်းများ - အပိုင်း 2
ဘယ်လို Apoptosis သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဖြစ်ပေါ်ရန်
နာမည်ကြီးတီထွင်သူ: Z ကိုမှတစ်ဦးက
Ostara များအတွက်နွေဦးရာသီတစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းထုံးတမ်း Hold
ဘယ်လို Clunkers အစီအစဉ်လုပ်ငန်းခွင်များအတွက်ငွေပါသလား
တစ်ဦးမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်ဓါတ်ငွေ့ Save လုပ်နည်း 10 သိကောင်းစရာများ
မည်သို့ 360 ပေါ့ပ်ဒါဟာတွန်းထုတ်တဲ့မှ
ဝါရှင်တန်ဒီစီကောလိပ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် ACT ရမှတ်နှိုင်းယှဉ်
10 Fab Beatles ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များ
အဆိုပါ Stableford ပွိုင့်စနစ်ရှင်းပြ
Linear တစ်ဦးက - အဆိုပါ Minoan ၏ Undeciphered ရေးသားခြင်းစနစ်